Awona maqhinga aphambili eLizwi | Iindaba zeGajethi
Awona maqhinga aphambili eLizwi
Ngaphandle kwezinye iindlela ezahlukeneyo esinazo kwimarike xa sibhala amaxwebhu okubhaliweyo, senza i-spreadsheet okanye iintetho, isisombululo iOfisi ehlala isinika sona isetyenziswa kakhulu, kwaye ke, elona xabiso lixabiso kwimarike, ngaphandle kwento yokuba ayikhululekile.
Phantse iminyaka engama-40 kwimarike, iLizwi liye laba yinto efanelekileyo eyona processor ilungileyo, iprosesa yegama enika inani elikhulu lemisebenzi, uninzi lwayo olungaziwayo kodwa lunokusinceda sandise imveliso yethu imihla ngemihla.
Inani lemisebenzi kunye nezinto ezinokubonelelwa liLizwi ukwanelisa iimfuno zabo bonke abasebenzisi, kubandakanya nezona ziingcali. Ukuba ufuna ukwazi eminye yemisebenzi iLizwi elisinika yona, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda, kuba ngokuqinisekileyo uya kuyifumana imisebenzi obungazi ukuba ungayenza ngeMicrosoft Word.
1 Khangela amagama endaweni yawo
2 Isichazi-magama sezithethantonye
3 Khangela amagama kwi-intanethi
4 Guqula uxwebhu, umhlathi, okanye umgca
5 Yenza izicatshulwa ezingahleliwe
6 Buyisa ifayile engagcinwanga
7 Khusela uxwebhu olunegama eligqithisiweyo
8 Yongeza i-watermark
9 Gcina kwifomathi yePDF
10 Yenza iiposta
11 Yongeza imilo kwisicatshulwa
Khangela amagama endaweni yawo
Xa siwugqibile umsebenzi, kunokwenzeka ukuba emva kokuwuphonononga, siye sapela igama, igama ebesicinga ukuba singaliphosa de sijonge ngaphandle kwesichazi-magama segama. Kule meko, ngakumbi xa uxwebhu lukhulu kakhulu, iLizwi alisivumeli ukuba sikhangele kuphela elo gama ukuliguqula, kodwa likwasivumela yitshintshe ngokuzenzekelayo oluchanekileyo.
Lo msebenzi ufumaneka kwibhokisi yokukhangela ebekwe kwi kwikona ephezulu ngasekunene kwesicelo.
Ukongeza kokubandakanya olunye lopelo olugqwesileyo kunye nokujonga igrama esinokukufumana namhlanje nakusiphi na isicelo, njengeprosesa yamagama elungileyo exabisa ityuwa yayo, nayo kubandakanya isichazi-magama sezithethantonye, isichazi-magama esivumela ukuba sibuyisele igama elikhethiweyo kunye nesithethantonye esisebenza ngokufanelekileyo kwisicatshulwa.
Ukufikelela kwi Isichazi-magama sezithethantonyeKufuneka sikhethe igama kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene lempuku kwaye sibeke imouse kwiZithethantonye ukhetho, ukhetho oluya kubonisa uluhlu kunye nezithethantonye zegama esilifunayo.
Khangela amagama kwi-intanethi
Xa sibhala uxwebhu kwaye asicacanga ukuba igama esilisebenzisileyo lichanekile, into yesiqhelo kukuphosa isikhangeli ekufuneka siqinisekisiwe liqela lethu. Ngethamsanqa, iMicrosoft ikhe yayicinga loo nto kwaye isinika ixesha elakhelwe ngaphakathi kwi-intanethi kwisicelo ngokwaso. Eli nqaku libizwa ngokuba yi-Smart Search.
Ukusebenzisa lo msebenzi, kufuneka sikhethe igama elichaphazelekayo, cinezela iqhosha lasekunene kwaye ukhethe ukuKhangela okuSmart. Ngelo xesha, iya kubonakala kwicala lasekunene lesicelo, iziphumo zokukhangela kwi-Bing Yeloo xesha, ukuze sikwazi ukukhangela ukuba ibhalwe ngokuchanekileyo na, ukuba lilizwi ebesilifuna okanye kufuneka siqhubeke nokujonga.
Guqula uxwebhu, umhlathi, okanye umgca
Ukuba, ngenxa yomsebenzi wakho, umdlalo owuthandayo okanye isifundo, uhlala unyanzelekile ukuba ubonisane okanye ubhale amaxwebhu kwezinye iilwimi, u-Microsoft ngokwendalo usinika umguquli, umguquleli ophethe ukuguqulela ngokuzenzekelayo uxwebhu lonke okanye isicatshulwa esinaso kukhethwe. Lo mguquleli uvela kwiMicrosoft kwaye ayinanto yakwenza neGoogle.
Ukuba isicatshulwa esifuna ukusiguqula, ayinawo amagama ahlanganayo, inguqulelo iya kuba ifezekile kwaye iyaqondakala. Umguquli ohlanganisiweyo usinika iziphumo ezifanayo nezomguquli kaGoogle.
Yenza izicatshulwa ezingahleliwe
Xa sinyanzelwa ukuba sibhale isicatshulwa ukugcwalisa izikhewu kuxwebhu, incwadana yentengiso okanye naluphi na uhlobo lwefayile, sinokubhenela ekukhupheleni nasekuncamathiseni izicatshulwa ezivela kwamanye amaxwebhu. ILizwi lisinika isisombululo esilula kule ngxaki incinci. Ukubhala = irandi (inani leziqendu, inani lezivakalisi), ILizwi liya kusibonisa inani lemihlathi eyenziwe yimigca esiyichazileyo.
Isicatshulwa esisibonisayo, ayenzeki ngokungacwangciswanga, into oyenzayo uyiphinda phinda-phinda isampulu yokubhaliweyo esinokuyifumana kwifonti esiyisebenzisa kuxwebhu esilwenzayo.
Buyisa ifayile engagcinwanga
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ubonile ukuba ikhompyuter yakho ivale ngokungalindelekanga, amandla aphumile, uphelelwe yibhetri ... okanye ngaso nasiphi na esinye isizathu, awuthathanga manyathelo okugcina uxwebhu. Nangona kunokubonakala ngathi yingxaki engenangqondo, ixhaphake kakhulu kunokuba unakho. Kuqheleke kakhulu, ukuba kwiinguqulelo ezininzi, sinokubakho fumana uxwebhu lweLizwi esingalugcinanga.
Khusela uxwebhu olunegama eligqithisiweyo
Ukuba kuphela sisebenzisa izixhobo zethu, kwaye sikhuselwe ngegama eligqithisiweyo elaziwa sithi kuphela, akuyomfuneko ukukhusela amaxwebhu esingafuni ukuba abanye abantu bawabone. Ukuba sifuna ukwabelana ngoxwebhu nabanye abantu, ngaphandle kwabalamli abanakho ukufikelela, eyona nto sinokuyenza yile ikhusele ngegama eligqithisiweyo. Ingcebiso: musa ukuthumela iphasiwedi kunye nefayile.
Ukukhusela uxwebhu, kufuneka siklikhawule kwi bar yezixhobo ze Khusela uxwebhu. ILizwi izakusicela iiphasiwedi ezimbini, ukuvula uxwebhu kunye nokuhlela. Eli gama lokugqitha akufuneki lilingane kuzo zombini iimeko, kuba ayingabo bonke abanokufumana uxwebhu olufanayo abanokufuna ukuhlela
Ukuba uxwebhu esilwenzayo lineenjongo zorhwebo, ukunqanda ukusebenzisa indawo kwi-header yeenyawo ukubeka idatha yethu, sinako yongeza i-watermark efihlakeleyo kwimvelaphi, i-watermark enokuba zombini kwifomathi yokubhaliweyo nakwifomathi yomfanekiso. Ngokucacileyo, ukuba asifuni ukuba lususwe, xa sabelana ngoxwebhu kufuneka silwenze ngendlela engeyiyo iLizwi, umzekelo iPDF, okanye ukukhusela uxwebhu ukuze kungabikho namnye onokuluhlela.
Gcina kwifomathi yePDF
Njengokuba iLizwi libe ngumgangatho kumzi mveliso wekhompyuter, ifomathi yefayile yePDF (Adobe) nayo. Enkosi koku, ILizwi lisivumela ukuba sigcine iifayile kwifomathi yePDF, ifomathi efanelekileyo yokwabelana ngamaxwebhu esingafuni kuhlelwa ngumamkeli wethu. Olu khetho lufumaneka ngaphakathi kweGcina njengenketho kwaye ucofe kwi-drop-down yeefomathi ezisinika zona.
Omnye wemisebenzi engaziwayo yeLizwi yinto enokwenzeka yenza iipowusta enkosi kumsebenzi weLizwi lobuGcisa, yenye yezona zindala zale sicelo kwaye yayisetyenziswa amaxesha amaninzi kwiminyaka engama-90 ukwenza iipowusta. Lo msebenzi usivumela ukuba sibhale isicatshulwa kwaye siyinike ubume kunye nombala esiwufunayo.
Yongeza imilo kwisicatshulwa
Umsebenzi onxulumene nokubonisa okucacileyo esinikwa liLizwi leLizwi, linokwenzeka lokongeza amanani, nokuba iibhokisi zombhalo, iintolo zesikhombisi, iintliziyo, izangqa, iimilo zejiyometri… Le mifanekiso ifakwe ngokungathi yayingumfanekiso, ke iphathwa ngokufanayo nemifanekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Awona maqhinga aphambili eLizwi
Imowudi emnyama iza kwi-iPhone nakwifowuni yakho ye-Android, indlela yokuyenza isebenze
Isilumkiso sobuxoki se-coronavirus ngomnxeba 632282524